Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta ee St. Louis: Sida loola xiriiro CSB • DutchtownSTL.org
Tilmaamaha Dutchtown ee Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta
The Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta waa xarunta nadiifinta Magaalada St.Louis ee wax ka qabashada dhammaan noocyada arrimaha aad la kulmi karto. Haddii aad la tacaaleyso xaalad aan degdeg ahayn, the CSB waa qofka la wacayo inta badan kiisaska.
Waxaad kala xiriiri kartaa Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta wixii ku saabsan qaybaha soo socda:
Arimaha Badbaadada Dabka
Arrimaha Dhismaha Cuntada
Baadhitaannada (Ganacsi iyo Degenaansho)
Arimaha Wadada iyo Alley
Qashinka, Qashinka, iyo Dib u warshadeynta
Haramaha iyo Cawska Sare
In kasta oo arrimahan ay ka hadlayaan qaybo badan oo magaalada ka mid ah iyo hay'ado, CSB-da ayaa dhexda u dhigaysa codsiyada adeegga waxayna fududeyneysaa habka loo soo tabinayo. Halkii ay ahayd in lala socdo macluumaadka xiriirka ee Waaxda Wadooyinka, Xakamaynta Xoolaha, Jardiinooyinka iyo Madadaalada, iyo wixii la mid ah, CSB waa dukaan-joogsi oo lagu maareeyo inta badan arrimaha magaaladaada.
Sida loola xiriiro Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta
Kala xiriir CSB taleefan
Xafiiska Adeegga Dadweynaha waxaa lagala xiriiri karaa (314) 622-4800. Waxaad raaci doontaa taxaddarro taxane ah si codsigaaga adeegga loogu jiheeyo jihada saxda ah. Ka dib markaad soo wargeliso arrintaada, waxaad weydiisan kartaa lambarka codsi adeeg. Tixraac lambarkan markii aad dib u soo wacdo si aad ula socoto arrin.
Khadka taleefanka CSB guud ahaan waa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha, 8 am-5 pm.
Ka soo warbixi Arrin ku soo dir Website-ka CSB
Xafiiska Adeegga Muwaadiniintu wuxuu leeyahay a degelka loogu talagalay soo tebinta arrimaha. Waxaad raaci doontaa dhowr tallaabo oo aad ku soo wargelinayso arrintaada.
Talaabada Koowaad: Xulo dhibaatada
Ka hel nooca dhibaatada aad la macaamilayso liiska qaybaha suurtogalka ah.
Markaad xulato qayb, waxaa lagu geynayaa bog labaad si aad u doorato nooc khaas ah oo dhibaato ah. Ma arki doontid xulasho ku habboon arrintaada. Xullo ciyaarta ugu dhow - waxaa lagu siin doonaa fursad aad ku sharraxdo arrintaada gaarka ah goor dambe.
Tallaabada Labaad: Xulo goobta
Marka xigta, kadib ayaa lagu weydiin doonaa inaad soo sheegto goobta gaarka ah ee arrinta ka jirto. Waad geli kartaa isgoys, nambarka xirmada, ama cinwaanka wadada.
Waa muhiim inaad soo sheegto cinwaan sax ah. Codsiyada CSB ee aan haysan cinwaan magaalo oo sax ah ayaa loo badinayaa in la diido. Haddii aad ka soo warinaysid arrin gurigaaga ka jirta, taasi way fududahay.
Wixii ku saabsan arrimaha dhismooyinka deriskaaga ah, ku dadaal inta ugu fiican inaad soo sheegto cinwaanka saxda ah. Mararka qaarkood way caawin kartaa booqashada Khariidadaha Google si loo tilmaamo cinwaan. Waxa kale oo aad ku xaqiijin kartaa cinwaanka ah cinwaanka magaalada iyo bogga raadinta hantida.
Markaad gasho cinwaan ama isgoys, waxaa lagu tusayaa khariidada goobta si aad u xaqiijiso.
Talaabada Saddexaad: Ka jawaab su'aalaha faahfaahsan
Waxay kuxirantahay nooca arinta aad usheegto CSB, waxaa lagaa codsan karaa su'aalo dhowr ah oo xulashooyin kusaabsan arintaada. Ka jawaab su'aalahaas sida ugu fiican ee aad kartid ah - waa inaad xulasho samaysaa mid ama dhinac kale.
Dhammaan codsiyada adeegga, waxaa laguu oggolaan doonaa inaad ku qorto sharraxaad faahfaahsan ereyadaada. Kani waa fursadaada si aad uhesho mid gaar ah. Dhammaan faahfaahinta aad bixin karto waxay kaa caawineysaa inaad hubiso in Xafiiska Adeegga Muwaadiniintu uu awood u leeyahay inuu xalliyo arrintaada.
Hubso inaad si sax ah u ogaatid halka ay arrinta ka taagan tahay. Tusaale ahaan: Arrintu ma waxay hortaal guriga mise luuq? Haddii aad dhibaato ka soo warbixisay isgoyska, iska hubi inaad ogaato koonaha isgoyska haddii ay ku habboon tahay arrintaada. Godadka godadka ama arrimaha kale ee waddooyinka, isku day inaad sharraxdo waddada ay arrintu ku taal (woqooyi, koonfur, iwm).
Talaabada Afaraad: Ku lifaaq faylasha taageeraya
Tallaabada xigta waa ikhtiyaari, laakiin waxay noqon kartaa mid waxtar leh. Haddii aad hayso sawirro arrinta ah, waad ku shubi kartaa halkan CSB si dib loogu eego. Waxaad sidoo kale ku lifaaqi kartaa dukumiintiyada PDF haddii ay khuseeyaan arintaada.
Waa inaad faylalka mid mid u soo rartaa Ka dib markaad faylkaaga ugu horreeya geliso, waxaad awoodi doontaa inaad wax badan soo dhejiso. Sawirro cad oo dhinacyo badan leh ayaa waxtar weyn u leh in la xalliyo kiiskaaga Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta.
Haddii aadan haysan faylal aad ku darto, guji “ka bood dukumintiyada taageeraya” xagga hoose.
Tallaabada Shanaad: Gali macluumaadkaaga xiriirka
Codsiyada Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta ee laga sameeyo websaydhka ayaa kaa doonaya inaad bixiso macluumaadka xiriirka. Xaaladaha badankood, waxaad bixin doontaa macluumaad toos ah sida magacaaga, cinwaankaaga, lambarka taleefankaaga, iyo emaylkaaga. Dhammaan macluumaadka looma baahna, laakiin lambar taleefan oo wanaagsan ama cinwaanka iimaylka ayaa kaa caawin kara haddii CSB ay u baahan tahay inay kula soo xiriiraan si ay u caddeeyaan arrin.
Dhibaatooyinka qaarkood, sida arrimaha biyaha iyo adeegga diidmada, waxaad geli kartaa lambarka koontada beddelkeeda.
Talaabada Lixaad: Soo gudbi codsigaaga
Kadib markaad gasho macluumaadkaaga xiriirka ama lambarka koontada, waad soo gudbin kartaa dalabkaaga. Markaad gujiso gudbinta, waxaa lagu tusi doonaa bog xaqiijinaya faahfaahinta dalabkaaga. Waxaad sidoo kale heli doontaa emayl leh faahfaahinta haddii aad bixisay cinwaan emayl.
Bogga xaqiijinta, waxaad u baahan doontaa inaad ku qorto lambarka codsiga adeegga iyo taariikhda jawaab celinta. Waxaan kaga hadli doonnaa kuwa ku jira qeybta dambe.
Tweet @stlcsb Si Aad Ubixiso Arin
Haddii aad farsamo ahaan aqoon u leedahay oo aad raadineyso hab deg deg ah oo aad arrimaha uga dacwooto Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta, habka ugu wanaagsan ee dhibaatooyinka looga warbixiyaa waa Twitter.
Fur barnaamijkaaga xulashada Twitter-ka oo samee qoraal kooban oo cinwaanka ku jira iyo sharaxaad kooban oo ku saabsan dhibaatada. In kasta oo aad ku xaddidan tahay 280 xaraf, ku dadaal sida ugu wanaagsan oo aad u koobnaan karto laakiin aad u cayiman tahay. Haddii aad hayso sawirro arrinta ah, waxaad ku soo lifaaqi kartaa illaa afar sawir qoraalkaaga tweet-ka.
Markaad wax walba hesho, u soo dir tweet-ka @stlcsb on Twitter. CSB waxay ku jawaabi doontaa lambarka codsiga adeegga iyo taariikhda jawaab celinta. Koontada waa lala socdaa jawaabahana waa la bixiyaa inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah.
La Socodka Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta
Si aad u hubiso halka ay marayso dalabkaaga adeeg, soo qabso lambarkaaga dalabka adeegga oo madaxa u gal Bogga xaaladda codsiga adeegga CSB. Waxaad awoodi doontaa inaad hesho faahfaahinta dalabkaaga iyo taariikhda jawaab celinta.
Haddii arrinta la baaray oo jawaab la soo gudbiyay, waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad aragto macluumaadkaas. Taariikhda dhammaystirka, xallinta, iyo sharraxaadda waa la taxi doonaa.
Arrinteydii CSB lama xallin. Hadda waa maxay?
Waa macquul in markaad tagto si aad u hubiso xaaladda dalabkaaga adeegga, waxaad ogaan doontaa in jawaab la soo saaray oo codsigii la xiray. Haddii aad rumeysan tahay in codsiga lagu xiray si qalad ah ama in jawaabta aysan ku filnayn, la xiriir Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta si aad ugala hadasho arrinta. Waxaad ka wici kartaa CSB lambarka (314) 622-4800 ama emayl csb@stlouis-mo.gov in dabagal lagu sameeyo. Sidoo kale waad sameyn kartaa ku soo qor barta @stlcsb lambarkaaga dalabka adeegga oo codso cusbooneysiin.
Waxaad sidoo kale soo gudbin kartaa codsi adeeg oo cusub oo loogu talagalay arrinta adoo adeegsanaya qaababka kor lagu sharaxay. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto lambarrada codsi adeeg ee hore ee la xiriira arrinta sharaxaaddaada.
Weli dhibaato ayaa haysata? La xiriir NIS!
Haddii aad weli dhibaato ku haysato sidii loo xallin lahaa adeeggaaga adeegga Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta, waxaad la xiriiri kartaa qaybtaada Khabiirka Horumarinta Xaafadaha. The NIS waa xiriiriyahaaga dhamaan waaxaha magaalada. Waxay wax ka qaban karaan arrintaada CSB ama si toos ah waaxda gacanta ku haysa codsigaaga.
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo faahfaahinta xiriirka ee NIS, booqo bartayada Bogga Takhasuska Horumarinta Xaafadda Dutchtown.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay August 11th, 2020 .
DutchtownSTL.org Kheyraadka Xaafada Dutchtown Tilmaamaha Dutchtown ee Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta